दैनिक राशिफल : मंसिर १३ गते सोमवार कुन राशिको भाग्य कस्तो ?
हजुरलाई स्वास्थ्यमा खोकी र चिसोले केही समस्या निम्त्याउन सक्छ । कुनै पनि ठाउँमा लापरवाह नहुनुहोस्।आयुर्वेदिक चीजहरू लिनुहोस्। बिद्यार्थीहरुको लागि केहि खुशीको खबर मिल्नेछ।
यदि तपाईंले आज कुनै शुभ समाचार प्राप्त गर्नुभयो भनेदिमाग शान्त हुनेछ।बच्चाहरूसँग केही समय बिताउन र उनीहरूको समस्याहरूको समाधानले उनीहरूको मनोबल र विश्वास बढाउँदछ। द्रव्य-प्राप्तिले मन खुशी हुनेछ।
व्यापार व्यवसायका गतिविधिहरु राम्रो हुनेछ। आजएक राम्रो अर्डर पनि फेला पार्न सकिन्छजसको कारण आर्थिक स्थितिमाकेहीसुधार हुनेछ।अफिसका कामहरू सुल्झाउने काममा तपाईंको उचित योगदान हुनेछ।
कसैसँग कुनै पनि पुरानो बहस दूर हुनेछ र सुखद भोजनको अनुकुल रहनेछ । पारिवारिक वातावरण रमाइलो रहनेछ।म्युचुअल सद्भाव र तालमेल उपयुक्त रहनेछ।प्रेमी / प्रेमिकाले एक अर्काको भावनाको ख्याल राख्नु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
एक्लोपना बढ्नु र सहकर्मीहरूसँग अन्तर्क्रियाको कमीले एक अर्काको गलतफहमी निम्त्याउन सक्छ।तपाईको भावनात्मक आवश्यकताको साथसाथै तपाईले पार्टनरको आवश्यकतालाई पनि ध्यान दिनु पर्दछ। केहि धननाशको संकेत रहेको छ।
तपाईं सामाजिक कामको एक हिस्सा बन्ने प्रयास गर्नुहुनेछर व्यक्तिगत चीजहरूमा केहिअवसरको कारणतपाईंलाई बिबिद तरीकाले फाइदा मिल्नेछ ।
स्वास्थ्य: कमर दुख्ने दिनभर लगातार रहन्छ। जीवनसँग सम्बन्धित कठिनाइहरू पार गर्न गाह्रो लाग्न सक्छ।कसैलाई पैसाको साथ वा अरू कुनै तरिकाले मदत गर्ने प्रयास नगर्नुहोस् जबसम्म तपाईं आफैंमा सर्वश्रेष्ठ हुनुहुनेछैन।
अप्रत्याशित खर्चहरू आउनेछन्जसको कारण तनाव हुनेछ।कसैको शब्दहरूमा लागेर तपाईले आफ्नो हानी गर्न सक्नुहुनेछ।तपाईको निर्णयलाई प्राथमिकतामा राख्नु उत्तम हुन्छ।बाहिरी गतिविधिहरूमा धेरै समय खर्च नगर्नुहोस्।
तपाईंलाई धार्मिक र आध्यात्मिक गतिविधिहरूमा समर्थन गरिनेछर दिमागमा सेवाको भावना पनि हुनेछ।नजिकको आफन्तसँग चलिरहेको समस्या हटाउन यो सही समय रहन्छ र एक अनुभवी व्यक्तिको सल्लाह परामर्श उचित हुनेछ।
व्यवसाय गतिविधिहरुमा केही लगानी गर्न उचित हुनेछ । व्यापारको स्थिति अब सामान्य प्रगतितिर लाग्नेछ तर धेरै फाइदा चाही हुनेवाला छैन।व्यवसायको नयाँ तरीका सुरु गर्न आवश्यक रहन्छ ।
परिवारका सदस्यहरूसँग राम्ररी छलफल गरेरसमस्या समाधान गर्न सम्भव रहन्छ कि तपाईंहरुलाई समस्याहरूको कारण के हो भनेर । छलफल गर्दा आफ्ना भावनाहरू नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहन्छ ।विशेषगरी आफ्नो बुबासँग कुरा गर्दा विगतमा गरेका गल्तीहरूलाई पछाडि छोडिदिनुहोस् र वर्तमान अवस्थामा ध्यान दिनुहोस्।
कृषिको क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूले नयाँ रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्दछन्। घरमा कसैको प्रयासको माध्यमबाटतपाईंको इच्छित पार्टनर पाउनुहुनेछ।स्वास्थ्य: एलर्जीको कारणले चिसो निको पार्न होम्योपैथिक सहयोग लिन आवश्यक पर्दछ।
माओवादीको अधिवेशनबाट दाङका ६ पालिकामा नयाँ नेतृत्व चयन
आज कुन-कुन राशि भएकाहरुको चम्किँदैछ भाग्य ?
मेष केही कठिनाइका भएतापनि तपाईं आफ्नो सकारात्मक दृष्टिकोण र सन्तुलित सोचको साथ अगाडि बढ्नुहुनेछ । कुनै धार्मिक ठाउँमा जानुभयो भने तपाईलाई मानसिक शान्ति हुन्छ र तपाई फेरि स्फूर्ति पाउनुहुनेछ । वृष ...